Khudbadda Madaxweyne Farmaajo ee Furitaanka Golaha Shacabka - WardheerNews
Khudbadda Madaxweyne Farmaajo ee Furitaanka Golaha Shacabka
﻿Mudane Guddoomiye, Mudaneyaal iyo Marwooyin,
Waxaan u mahad celinayaa guddigga Baarlamaanka labadiisa aqal ee Dastuurka iyo Guddiga Madaxa Bannaan ee dastuurka oo dhammaystiray qabyo qoraalka 10-ka cutub ee dastuurka. Waxaan ku bogaadinayaa howsha ay qabteen iyo wada shaqaynta ka dhexaysa Wasaaradda Dastuurka iyo labada guddi. Waxaan ku dhiirrigelinayaa labada guddi iyo Xukuumaddaba in ay sii dardargeliyaan howsha ay hayaan si loo dhammaystiro 5-ta cutub ee ka hartay Dastuurka. Waxaan sidoo kale tacsi u dirayaa eheladii uu ka geeriyooday Wasiirkii hore ee Dastuurka Marxuum Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo dadaal ku bixiyay sidii Dastuurka loo dhammays tiri lahaa. Waxaan Ilaahay uga baryayaa in uu naxariistiisa iyo jannadiisa siiyo.Waxaa sidoo kale xusid mudan, in bishii Juun ee sannadkii la soo dhaafay ay Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowlad Goboleedyadu ku heshiiyeen hanaanka khayraad wadaagga dalka.
Dib u heshiisiintu waxay ka mid tahay ujeeddooyinka ugu muhiimsan ee maamulkayga. Sidaas awgeed, waxaan rabaa inaan idinla wadaago in Golaha Wasiirada ay u suurta gashay in ay ansixiyaan Hannaanka Dhab-u-heshiinta Qaranka iyo Qorshe hawleedkiisa fulineed si loo qaabeeyo, loona dardargeliyo dadaallada dib-u-heshiinta ee dalka ka socda. Dhanka kale, waxaa naga go’an inaan ka mira dhalinno wadahadallada Maamulka Somaliland iyo Dowladda Federaalka ee Soomaaliya si xal waara loogu helo tabashooyinka walaaleheen Somaliland. Waxaan ku bixinaynaa dadaal dheeri ah midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Waxaan diyaar u nahay inaan si waafi ah uga garawno tabashooyinka ay qabaan walaaleheenna reer Somaliland.
Kalfadhigaan wuxuu ku soo beegmay iyadoo uu meel fiican marayo xiriirka wada shaqayneed ee u dhexeeya Dawladda Federaalka iyo kuwa Dowlad Goboleedyada, taas oo qayb weyn ka qaadan doonta xaqiijinta himilooyinka ummadda Soomaaliyeed, waxaana naga go’an inaan sii xoojinno wada shaqayntaas hadduu Eebe yiraahdo. Waxaan bogaadinayaa doorashooyinkii ka qabsoomay Dowlad Goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Puntland, waxaana ku kalsoonahay in doorashooyinka Jubaland iyo Galmudug ay iyaguna xilligii loo asteeyay ku qabsoomi doonaan. Mudane Guddoomiye, Siyaasaddeenna arrimaha dibedda waxaa saldhig u ah in Soomaaliya ay xiriir wanaagsan la yeelato waddamada caalamka, iyada oo iskaashigeedu ku qotomo ilaalinta danaha qaranka Soomaaliyeed. Waxaan Shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in aan had iyo jeer u taagannahay ilaalinta midnimadeenna, madaxbanaaniddeena iyo ilaalinta xuduudeheenna dhulka, badda iyo cirkaba.